Kitra - M'Foot fokontany :: Haverina ny lalao manasa-dalana eo amin’ny 67Ha City sy ny Masp • AoRaha
Kitra – M’Foot fokontany Haverina ny lalao manasa-dalana eo amin’ny 67Ha City sy ny Masp
Nafana ny dingana manasa-dalanan’ny lalao “M’Foot fokontany”, omaly, teny anivon’ny Boriborintany enina eto an-drenivohitra. Anisan’izany ny fifandonan’ny 67Ha City sy ny Masp, teny amin’ny Boriborintany voalohany.
Teo amin’ny fizaram-potoana faharoa no najanona ny lalao noho ny tsy fitovian-kevitra teo amin’ny mpifanandrina. Isa mitovy 1 sy 1 no nifandaozan’ny roa tonta. Tsy mbola fantatra kosa ny fotoana sy ny toerana hamerenana izany fihaonana izany. Amin’ny alarobia izao no hanaovan’izy ireo sonia ny fifanarahana mahakasika izany.
Nizotra am-pilaminana na ny ampahefa-dalana ny sabotsy na ny manasa-dalana omaly ankoatra izay tranga izay. Hita fa ekipa samy manana ny traikefany ny nifandona ny faran’ny herinandro teo. Maro tamin’ireo fihaonana no ady sahala sahala ka niditra tamin’ny “Tir au but”. Boriborintany efatra no nahitana izany. Nisaraka ady sahala 1 noho 1 ny JSM Morarano sy Rimbahiny ary 1 sy 1 ihany koa ny fihaonana teo amin’ny DCA sy ny FC Andranomahery Club (Boriborintany fahatelo). Samy tsy nisy nitoko kosa ny ekipan’ny Jupiter Namontana raha nihaona tamin’ny Mahery Foot (Boriborintany fahefatra) sy Sport 6 City nifandona tamin’ny FC Tafaray ary Lascar Amboavahy nifaninana tamin’ny Ramahenina (Boriborintany fahenina).
Fantatra, araka izany, fa tafakatra amin’ny dingana famaranana kely eny amin’ny boriborintany enina ny CF TFC, FC Miray, JSM Morarano, DCA, FC Betongolo, Ouest Mananjara, Jupiter Namontana, Garage Radom, FC Zandrikely, Sport 6 City, Lascar Amboavahy. Ho hita amin’ity herinandro ity kosa izay tafakatra amin’ny 67Ha City sy Masp.
Handball – Fifaninanam-pirenena Nanjakazaka ny ASSM sy ny THBC